भीम घिमिरे - कान्तिपुर समाचार
भीम घिमिरे का लेखहरु
“फिल्म खेल्न सजिलो, बनाउन गाह्रो”
भीम घिमिरे, आश्विन ३०, २०७४
फिल्म निर्माणमा तिनैले हात हाल्छन्, जो कुनै न कुनै विधामा काम गरिआएका हुन्छन् । कलाकार रमेश उप्रेतीको हकमा पनि त्यस्तै हो ।
क्रान्तिकारीको वैकल्पिक गठबन्धन बन्छ : बैद्य
भीम घिमिरे, आश्विन २२, २०७४
एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनसँग चिढिएका साना बामपंथी दलहरूले बेग्लै गठबन्धन बनाउने तयारी गरेका छन् । यसको खुलासा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले गरेका हुन् ।
घुम्न जाने होइन त मनाङ ? [फोटोफिचर]
भीम घिमिरे, आश गुरुङ, आश्विन १५, २०७४
सडक मार्ग सहज भएसँगै गत वर्ष धेरै आन्तरिक पर्यटक मुस्ताङ पुगे । हिमाल पारिका दुइ जिल्लामध्येको मुस्ताङको भौगोलिक विविधताबारे धेरैले थाहा पाए । अब अर्को जिल्ला मनाङको यात्रा गर्दा कस्तो होला ? मनाङको यात्रा मुस्ताङजस्तो सहज छैन । यतिबेला जान्छु भन्नेहरू सडकमार्गको जोखिमपूर्ण यात्रा रुचाउनेमध्येका पर्छन् । मनाङमा हुम्डे एयरपोर्ट छ तर, सञ्चालनमा छैन । जाने बाटो एउटैमात्र छ । एउटै ढुंगा जस्तो पहाड खोपेर भीरको बाटो जान खोज्नु साहसिक यात्रा रुचाउनेका लागि अनौठो अनुभव दिलाउने प्रकारको छ ।
साकार हुँदै पोल्देनको स्याउ सपना
भीम घिमिरे, आश गुरुङ, आश्विन १०, २०७४
सदरमुकाम चामेबाट करिब ६ किलोमिटर माथि नेस्याङ १ भ्राताङको बगैंचामा यतिबेला स्याउ टिप्ने क्रम सुरु भएको छ ।
आहा–रारा फुटबलबाट सहारालाई २७ लाख
भीम घिमिरे, असार ३१, २०७४
खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नसक्दा मुलुककै प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता आहा–रारा गोल्डकपको आयोजक सहारा क्लवको आम्दानी स्थिर भएपनि बचत घटेको छ ।
भीम घिमिरे, असार १६, २०७४
पाल्पाको बर्तुङबाट पोखराको बसयात्रामा मैले गत साता झ्यालबाट मिल्काइदिऊँ जस्तो–जस्तो लागेको पानीको खाली बोतल फालिनँ । सहचालकलाई सोधेँ, ‘भाइ यो कता फाल्ने ?’ उनले सिटमाथिको सामान राख्ने ठाउँ (लगेज र्‍याक) देखाए, त्यसमै राख्न इसारा गरे ।